कस्तो अवस्थामा लसुन खाँदै नखाने ?
लसुनलाई वर्षौदेखी औषधिको रुपमा पनि प्रयोग गरिन्छ । आयुर्वेदिक चिकित्सकका अनुसार लसुनको प्रकृति गर्मी र सुख्खा हुन्छ ।
कस्तो अवस्थामा नखाने ?
होमियोप्याथिक ओषधि प्रयोग गर्दा
निम्न रक्तचाप भएमा
पेटमा समस्या भएमा
गर्भ निरोधक पिल्स लिएमा
एलर्जीको समस्या भएमा
रगत पातलो बनाउने औषधि लिदा